Ebook maimaim-poana: Mihainoa! Fihainoana ara-tsosialy ho an'ny orinasa matsilo | Martech Zone
Ebook maimaim-poana: Mihainoa! Fihainoana ara-tsosialy ho an'ny orinasa matotra
Alarobia, Oktobra 16, 2013 Alarobia, Oktobra 16, 2013 Douglas Karr
Zareo ve tena toa anao? Tsy dia sarotra ny mamantatra izany andro izany.
Mihaino sosialy Azo inoana fa ny teknolojia manan-danja indrindra maharesy lahatra amin'ny varotra hatramin'ny media sosialy mihitsy. Izahay izay manana lalam-barotra mahazatra dia mahatadidy ireo andro izay nahatongavan'ny fahatakarana hoe iza ny mpanjifanao sy izay noheverin'izy ireo momba anao dia nitaky fandatsaham-bato, vondrona mifantoka ary / na fanaovana fikarohana mandreraka any amin'ny orinasa iray hafa, izay nandany fotoana sy vola be lavitra noho izany tianay.
Androany, ny hevi-tsain'ny mpanjifa sy indostrialy sarobidy izay taloha dia lafo, mandany fotoana ary manan-tantara avy hatrany dia fotoana tena izy ary mora. Fanaraha-maso ny media sosialy Tsy natao ho an'ny varotra fotsiny: afaka mihaino ny fironana amin'ny indostria ianao, ny fandalinana ny fifaninanana, ny fahitana ny vokatra ary ny tranga fampiasana maro hafa. Isaky ny te hahalala izay lazain'ny olon-kafa momba ny zavatra misy ifandraisany amin'ny orinasanao ianao, ny fihainoana ara-tsosialy dia fomba haingana sy haingana hahitana azy.
Ny herin'ny media sosialy dia ny tambajotra sosialy ary ny atiny no atiny!
Ireo mpanohana anay ao amin'ny Meltwater namoaka ny e-boky vaovaon'izy ireo, Henoy: ny torolàlana azo antoka hampiasana ny fihainoana ara-tsosialy ho an'ny orinasa matsilo nosoratan'i Leslie Nuccio. Nisitrika lalina tamin'ny fanaraha-maso ny media sosialy i Leslie.
Ity torolàlana feno ity dia mandeha amin'ny alàlan'ny fomba fitaterana fiara Marketing amin'ny teny vava, mamantatra raha ny mpanjifanao sy tena tia anao ny vinavina, ahoana no tohizo foana ny fifaninanana, ahoana no fantaro izay miresaka momba ny orinasao, ahoana no tadiavo ny resaka fa zava-dehibe ary ahoana ny fomba hanombohana ny meme anao manokana! Maherin'ny 30 ny pejy miloko feno hatsikana, ohatra mahafinaritra, statistika, antsipirihany ary fampahalalana azonao apetraka hampiasana ny valin'ny orinasa amin'izao fotoana izao.
Hianaranao ny atao hoe fanaraha-maso ny haino aman-jery sosialy, ny fomba fampiasana fanaraha-maso media sosialy manerana ny fikambanana marketing anao sy ny sisa, ary ny antony maha-zava-dehibe ny marketing amin'ny media sosialy.
Rehefa dinihina tokoa, miaraka amin'ireo mpampiasa Twitter irery no mandefa salanisa Bitsika 400 miliara isan'andro, tsy mendrika trompetra sofina nomerika ve izany?
Tags: fihainoana mifaninanaeBookmihainoaaraho ny fifaninanana ataonaofihainoana ara-tsosialyfanaraha-maso ny media sosialyfanaraha-maso ara-tsosialyWomvarotra am-bava
Douglas Karr Wednesday, October 16, 2013 Wednesday, October 16, 2013
MarketingPilot: Microsoft Dynamics CRM Integrated Marketing Management
Torolàlana momba ny haino aman-jery sosialy ho an'ny matihanina ara-bola